Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Andres Iniesta Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Legend kasị mara aha na aha njirimara; 'don dons'. Nwa nke Andres Iniesta Na-akọ akụkọ banyere akwụkwọ akụkọ na-enweghị isi Ihe eziokwu na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya kama ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Andres Iniesta Biography Akụkọ nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, hapụ Amalite.
Andres Iniesta Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ndụ mbido
Andrés Iniesta Lujánwas mụrụ na 11th ụbọchị nke Mee, 1984 na obodo mara mma nke Fuentealbilla, Spain site na nna, José Antonio Iniesta (mongol Business) na mama m, María Luján Iniesta (onye na-elekọta ụlọ).
A mụrụ ya dịka nwa-ọma na ọgaranya. Ọgaranya nye nne na nna ya ma nwee obi ụtọ si n'otu obodo dị ebube nke Albacete, Spain. Ọ tolitere n'obodo Albacete nke a maara maka ihe abụọ; ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị ọkà okwu Spanish na mmanya ha dị mma.
Andres nwere ihe niile ọ chọrọ ma chọọ na ndụ dịka nwatakịrị. N'aka nke ya, ọ kwanyere ọchịchọ nne na nna ya nwere maka ya ùgwù.
Andres Iniesta child Story plus na-agbaghasị akụkọ ndụ eziokwu-Ọrụ mmalite
Ọ malitere igwu egwu n'oge 10 na Albacete Balompié, ụlọ ọrụ dị n'obodo ya Albacete.
Mgbe ọ dị afọ 12, mgbe ọ na-egwuri egwu n'egwuregwu, ọ dọtara mmasị nke ụlọ ịgba bọl na Spain. Nne na nna Iniesta nwere njikọ na onye isi FC FC bụ Enrique Orizola.
Nyere na nwa ha nwoke nwere onyinye n'egwuregwu ahụ, ha kwenyere Orizola ka ha tụlee ikweta Iniesta n'ime Ụlọ Akwụkwọ Ntorobịa Barcelona.
N'ajụjụ ọnụ a mere n'oge na-adịbeghị anya, papa Iniesta chetara oge a jụrụ ya .. "Olee otu ị ga-esi cheta oge Andrés ji chịkọta akpa ya wee kwaga Barcelona?". Dị ka ya ..Ọ bụ ogologo oge nke o mere mkpebi ikpeazụ. Anyị natara onyinye nke FC Barcelona na ọ ga-aga La Masia, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ahụ n'onwe ya, ebe anyị enweghị ike ịhapụ obodo anyị bụ Fuentealbilla. Ọ chọghị ịhapụ ezinụlọ ahụ wee gwa m nke ọma na ọ hụghị onwe ya ịla. Agwara m ya ụdị ohere ndị a anaghị abịakarị, na ọ ga-enweta ezigbo nhazi na agụmakwụkwọ… …bọchị ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị Andrés bịakwutere m wee sị: “Papa, ana m aga Barcelona”. Enwere m mgbagwoju anya, ya mere ajụrụ m ya ihe kpatara ya ji gbanwee obi ya. Ọ gwara m ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ. O kwuru, sị: "Ana m aga, n'ihi na ị chọrọ ka m laa, n'ihi na ọ bụ nrọ gị". Malite n'oge ahụ enwere m ike ịsị na amụtala m ọtụtụ ihe n'aka nwa m nwoke. Ọ kụziiri m ọtụtụ ihe mgbe ọ bụ nanị 12.
Ya na nne na nna ya gara ileta ụlọ akwụkwọ La Masia a ma ama maka ndị na-eto eto, mgbe nke ahụ gasịrị, ndị mụrụ ya kpebiri idebanye aha ya na agụmakwụkwọ. Mgbe foto ya gasịrị, ndị mụrụ ya hapụrụ ụlọ. Nke a mere n'afọ 1996.
N'adịghị ka ọtụtụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, FC Barcelona na-arụ ụlọ niile ha na-egwu site na obodo ha na ụlọ mbikọ ha site na afọ 13 ma ọ bụ 14. Otú ọ dị, Iniesta bụ nanị 12 ma ọ bụ ihe dị iche iche maka ụlọ ọrụ ịbanye na nwata. N'agbanyeghị ihe ụfọdụ, ụlọ ọrụ ahụ gara n'ihu na-anara ya ma nwee ike ijide n'aka na ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma ha ga-ewere maka onwe ha na onye ọkpụkpọ.
Andres Iniesta child Story plus na-agbaghasị akụkọ ndụ eziokwu-Mmalite Na-esiri Ike
Otu nwa okorobịa Iniesta gbalịsiri ike ịnọ n'ebe nne na nna ya nọ, ọ na-enwekarị ụlọ ụlọ ma nọgide na-enwe onwe ya.
Iniesta kwuru na ya “Osimiri tie mkpu” ụbọchị ọ hapụrụ La Masia ma gbalịa ịbụ ndị nne na nna ya. Ọ na-eme ihere ma na-edebe onwe ya mgbe ọ nọ ebe ahụ.
Andres Iniesta child Story plus na-agbaghasị akụkọ ndụ eziokwu-Na-eto Eto
Ọ bụ onye isi ndị otu Barcelona n'okpuru afọ 15 meriri na Nike Premier Cup nke afọ 1999, wee nye goolu mmeri na nkeji ikpeazu nke ikpeazụ, ma kpọọ ya onye egwu bọọlụ. N'okpuru ebe a bụ ihe osise nke Guardiola na-enye Iniesta, ihe agha ya.
Andres Iniesta na-eto eto na-enweta onyinye site na Pep Guardiola.
Ụzọ ya, nkwụsị ya na nkà ya mere ka Spain merie 17 European Championship 2001 na nke Under-19 na afọ sochirinụ.
Naanị mgbe Iniesta rutere n'ụgbọala ahụ, mgbe ahụ, onyeisi-isi Pep Guardiola ama ama gwara Xavi ibe ya: “You're ga-agbara m ezumike nká. Nwata a [Iniesta] ga-agbara anyị niile ume ”
Naanị mgbe ọ kwụsịrị ịla ezumike nká Guardiola site na ọrụ 11 ya na klọb nke si na 1990 ruo 2001. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Andres Iniesta child Story plus na-agbaghasị akụkọ ndụ eziokwu-Ndụ Ezinụlọ
Andres Iniesta sitere na ndị dị umeala n'obi ma nwee ọgaranya ezinụlọ. Ezinụlọ ezinụlọ Spanish.
Onye na-azụ ahịa nna ya bụ onye malitere ịcha. José Antonio Iniesta malitere dịka onye na-ewu ụlọ tupu ya enwee alaeze ukwu. Mgbe ọ na-enweghị ọrụ ọ ga-arụ, ọ na-agagharị n'ụsọ oké osimiri iji rụọ ọrụ dị ka onye nlekọta.
Ọ na-ahụkarị bọl ma mee mgbalị niile, ya mere nwa ya Andrés nwere ike ịkọ nrọ nke inwe bọl na ụkwụ ya.
José Antonio na Andres.
Malite mgbe ọ dị obere n'obodo Fuentealbilla na Spen ruo mgbe ọ ga-eru elu bọl nke ụwa, José Antonio nọ n'akụkụ nwa ya nwoke.
Mmekọrịta siri ike nke Andres Iniesta na nna, Jose.
A maara ya ịkwa ákwá mgbe ọ hụrụ nwa ya nwoke ka ọ na-enwe ihe mgbu ma ọ bụ merụọ ahụ. Dị ka José Antonio Iniesta si kwuo,
“Ee, ọtụtụ. Anya mmiri na-agba m ngwa ngwa. M na-ebe ákwá mgbe Andres na-afụ ụfụ ma ọ bụ na-ahụ ya na mgbu na ịmara na ihe anaghị aga. N'ikwu nke a, enwere ọtụtụ oge ịkwa ákwá mgbe Andrés na-anọghị n'ụlọ iji malite ọrụ ya na FC Barcelona. ”
N'agbanyeghi na otutu ndi egwuregwu n'uwa no, Iniesta ka enwere oge maka ahia ulo.
José Antonio Iniesta na Nwa, Andres Iniesta na-eme Business Business.
Ka ọ dị ugbu a, José Antonio na-agba ọsọ ezinụlọ Bodegas Iniesta. Mgbe ndị mmadụ gwara ya ka o jiri nwa ya tụnyere mmanya, ọ na-ekwu "Ọ ga-abụ mmanya dị mma, nwee obi eziokwu ma nwee uche."
Iniesta Sr. na-akọwa otú nwa ya nwoke si elekwasị anya n'egwuregwu football ya ma na-eme nke ọma maka ụlọ ọgbakọ na mba.
"Ọ dịghị mgbe ọ chọrọ ịbụ onye isi ma ọ bụ onye isi nke ihe ọ bụla," ọ na-ekwu. “E nwere ndị isi ndị meriri ọrụ ha site na obi ike ha na ndị ọzọ na-eme ya na ịdị umeala n’obi ha, ndị otu ha họpụtara ha. Nwa m nwoke bụ Andres bụ naanị ha abụọ. ”
Nne: María Luján nke dị n'okpuru ebe a bụ nne Andres Iniesta.
Andres Iniesta na mama m, María Luján.
María Luján abụghị onye mgbasa ozi kama ọ bụ onye a maara na ọ na-ele ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu ọ bụla nwa ya nwoke na-egwu kemgbe ọ malitere ọrụ ya.
SISTER: Maribel Iniesta bụ nanị nwanne na nwanne nwanne Andres Iniesta. Ọ tolitere na ebe azụmahịa mmanya na-aga n'ihu. Ọ dị ya ka nna ya.
Nwanne nwanyị Andres Iniesta - Maribel Iniesta.
Maribel ka na-arapara na mgbọrọgwụ ya ka onye na-elekọta ụlọ ọrụ mmanya ezinụlọ ya ugbu a.
Andres Iniesta child Story plus na-agbaghasị akụkọ ndụ eziokwu-Ndụ mmekọrịta
Reshụnanya Andres Iniesta Akụkọ na ndụ gbara naanị otu nwanyị gburugburu. Ọ bụghị onye ọzọ karịa nke mara mma, Anna Ortiz.
Reshụnanya Andres Iniesta na Anna Ortiz.
Anna Ortiz bụ Catalan na onye ọkachamara na nhazi ọkachamara, nyocha foto,
ntutu isi, mma na ahụ ike, Ọ na-arụ ọrụ ugbu a dị ka onye mmepụta ime ụlọ na Coton et Bois.
Ha na-ezute n'oge Iniesta nwere mmerụ ahụ na afọ 2008. Ọ hụrụ ya n'anya mgbe ọ na-enye ya ụfọdụ nlekọta ahụ ike.
Na Septemba 2010 Andrés Iniesta gosipụtara na Anna dị ime na nwa ya. Ọ mụrụ Valeria Iniesta Ortiz. N’okpuru bụ foto Valeria na ndị mụrụ ya.
Andres Iniesta, Anna Ortiz na ada ha, Valeria.
Andres iniesta na Anna Ortiz mgbe afọ anọ nke na-anọkọ obi ụtọ kpebiri ịlụ na 2012. Alụmdi na nwunye ahụ mere na nnukwu ụlọ nke Tamarit nso Tarragona.
N'ime aha ndị ama ama bịara agbamakwụkwọ ahụ bụ Lionel Messi, yana Samuel Eto'o bụ onye na-agbara Barcelona bọọlụ.
N'oge na-adịghị anya mgbe agbamakwụkwọ ahụ kpugheere ndị na-eso ụzọ ya 3.9million ozi na Twitter, na-ede foto nke onwe ya na nwunye ya na tweeting: 'Zingbọchị dị ịtụnanya! Naanị ịlụ di.
Agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ Andres Iniesta.
Andres Iniesta na nwunye ohuru ya bụ Anna Ortiz ji ezumike mmiri ha na-aga n'akụkụ osimiri na Cancun, Mexico. N'ebe ahụ, ndị ọhụrụ lụrụ di na nwunye gosipụtara nnọọ obi ụtọ ma dị jụụ ka ha na-eme ka oge kachasị mma.
Andres Iniesta na nwunye ya na-enwe obi ụtọ.
Na 31st nke Mee, 2015, Andres na Anna nwere nwa ha nke abụọ na nwa mbụ. Aha ya bụ Paolo Andrea Iniesta.
Andres Iniesta bụ nna dị mma nke na-achọ ka ya na ụmụ ya na-enwe ezigbo oge. Ọ na-agbalị mgbe niile ka ụwa mara nke ahụ. Ọ bụ nne ma ọ bụ nna nke na-etinye ụmụ ya karịa mkpa nke ya ma chọọ ya.
Andres Iniesta- Nna na-elekọta.
dị nnọọ ka Radamel Falcao na Robert Lewandowski, Andres Iniesta ebiwo ndụ ezinụlọ obi ụtọ.
Andres Iniesta Child Story Plus Ejighị Echiche Eziokwu Eziokwu-Ụlọ mmanya
Ee, ndị bụbu ndị njikwa Premier League Sir Alex Ferguson na Harry Redknapp maara nke ọma n'ihi na ha hụrụ mmanya n'anya, ma ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha gafere ubi-vine ma ọ bụ winery.
N'ikwu nke a, ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ taa nwere ike itinye akụ ha n'ụgbọala egwuregwu ma ọ bụ ụlọ ndị na-egbukepụ egbukepụ, karịa itinye ego na ihe ọ bụla dị ka ịkụ mkpụrụ nke mkpụrụ vaịn.
Ma eleghị anya, ọ bụghị nke a maara nke ọma, n'ihi àgwà ya dị jụụ, bụ Andres Iniesta bụ onye tinyela oge ya na ego ya n'ịmepụta mmanya.
Andres Iniesta- Onye Ọkachamara Mmanya Mmanya.
N'oge agbamakwụkwọ ya, o mere ka ndị ọbịa ya niile drinkụọ mmanya Iniesta ya nke aha nwa ya nwanyị bụ Valeria.
Ọ bụ azụmahịa ezinụlọ ya. Ọ bụrụ na ị bi na Spen, ị ga-ahụkwa ihu ya ka ọ na-enwu gbaa site na mgbasa ozi na-akwalite mmanya sitere na azụmaahịa ezinụlọ ya, Bodega Iniesta. Nke a bụ nnukwu azụmahịa na ezinụlọ niile na-etinye aka na ya.
Ezinụlọ ahụ nwechara azụmahịa ahụ tupu ọ ghọọ onye na-egwu egwuregwu football nke ọma, ka ọ na-etolite, o tinyewokwa aka n'ịgbasa.
N'ezie, Iniesta bụ ọgbọ nke atọ sitere na ezinụlọ ya iji kere òkè na azụmahịa mmanya, bụ nke nna nna ya bụ Jose Antonio guzobere.
N'ozuzu ya, ezinụlọ ya nwere ubi vaịn 180 nke ubi vaịn, a na-emekwa ka mmanya nile si na mkpụrụ ya pụrụ iche.
Ubi Ubi Vine Andres Iniesta.
Azụmaahịa ahụ dị na Albacete, nke bụ njem elekere abụọ site na Valencia, yana awa abụọ na ọkara site na Madrid, nnukwu ahịa ya. Companylọ ọrụ ya na-ewe mmadụ iri atọ na ise, 35 na winery, yana 25 oge niile n'ubi vaịn ebe a na-egbute mkpụrụ osisi mmanya pụrụ iche.
Mkpụrụ osisi Andres Iniesta Mmanya.
Dị ka ọ dị n'oge ọ na-ede akwụkwọ, ụlọ ọrụ ya na-ere mmanya a na-akpọ aha ya bụ Valeria, na onye ọzọ mgbe nwa ya bụ Paolo Andrea.
Ọ kpọbatara mmanya ọzọ akpọrọ "116" nke na-echeta oge nkeji na egwuregwu ahụ mgbe ọ meriri ihe mgbaru ọsọ mmeri na njedebe nke 2010 World Cup.
N'ozuzu ya, a na-emepụta mmanya 1 na 1.2 nde mmanya ya na ụlọ ọrụ ya kwa afọ. Mmanya ya dị na mba 33, gụnyere East Asia, South, Central na North America, na n'ebe ọdịda anyanwụ na Europe nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ. Na UK ha na-ere maka £ 6.50 ka £ 17.
Andres Iniesta child Story plus na-agbaghasị akụkọ ndụ eziokwu-Ọ bụ otu ugboro na Madrid Fan
Dịka onye ọ bụla ọzọ na-agba bọl football, Andres Iniesta na-akwado ọgbakọ ya, Albacete na Barcelona bụ nso nke abụọ n'ihi na ọ na-efe Michael Laudrup. Mgbe ọ dị nanị isii, ndị Catalonian giants meriri 7-1 ya ọ hụrụ n'anya, ọ malitekwara iwe iwe maka akụkụ ahụ nke ga-eme ka afọ ju ya site n'ịgbanwe nkwado ya na ndị Real Madrid ha kasị asọ asị.
A gbanwere ụgwọ ọ gbanwere n'iguzosi ike n'ihe mgbe Laudrup kwagara Real Madrid na 1994. Dịka e gosipụtara na mbụ, Ọ bụ nna ya mere ka ya na FC Barcelona kwadoro ya.
Andres Iniesta child Story plus na-agbaghasị akụkọ ndụ eziokwu-Echere nke ọma
Dị ka ọ dị n'oge ọ na-ede akwụkwọ, Andres Iniesta bụ doro anya na ndị agbụrụ a kacha asọpụrụ na Spen. Mmanya ya na-ere nke ọma na Madrid, ebe obibi ya.
Na Catalonia, a na-akwanyere ya ùgwù dị ka onyeisi ndị agha nke Barcelona, ​​na ndị Spain ọzọ, a na-akwanyere ya ùgwù dịka onye na-emeri World Cup maka Spain.
Ozokwa, ọ bụ onye na-ahụkarị ezinụlọ ezinụlọ Spanish, nke ndị mmadụ nwere ekele. Ọ naghị etinye aka na ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke ụfọdụ ndị Barcelona ma ọ bụ Real Madrid na-eme mgbe ụfọdụ.
Andres Iniesta child Story plus na-agbaghasị akụkọ ndụ eziokwu-Ọ dịghị mgbe ọ bụla chọrọ FC Barcelona
Star Andres Iniesta bụ onye Barcelona na-egosi n'ụzọ dị ebube na ya achọghị ịbanye na club Catalan dịka nwatakịrị n'ihi na ya na ezinụlọ ya dị ike. Ọ chọrọ ihe ịma aka ọhụrụ, ọchịchọ ịkwaga n'ebe dị anya.
N'okwu ya, Achọghị m ịbịa n'ihi na echere m na m so ezinụlọ m na-eme enyi. Achọrọ m ịga ebe dị anya na-enweghị ha, ” Iniesta gwara BỤ NWA.
Oge izu na mkparịta ụka mụ na papa m mere ka ọ gbanwee.
Iniesta gara n'ihu…“Mụ na nna m nwere nnukwu ntụkwasị obi, enwere ọtụtụ mmekọ ma mara na mgbe ọ gwara m ihe, ọ na-eme nke ọma. Ana m asọpụrụ nna m ma ama m na m ga-adaba. Mgbe m kpebiri igwu egwu na FC Barcelona, ​​ahụrụ m ọnwa ndị kacha njọ ná ndụ m dị ka mmadụ, mana site n'enyemaka nke mmadụ niile, kwa ụbọchị, ọ ka mma. "
O doro anya na mkpebi Iniesta na-atụ ụjọ na mbụ arụgoro nke ọma.
Andres Iniesta Child Story Plus Ejighị Echiche Eziokwu Eziokwu-Ya ọtụtụ Nicknames
Iniesta nwere ọtụtụ nicknames. The Spanish Press na-ezo aka ya dị ka Don Andres ebe ụfọdụ na-akpọ ya El Ilusionista (The Illusionist) n'ihi ike ya na njikere ime ihe ọ bụla na pitch.
Ndị ọzọ na-akpọ ya El Cerebro (The Brain) n'ihi enweghị ike ọgụgụ isi ya.
N'ime igwu na Real Madrid ama ama Galacticos, Iniesta a na-akpọ ala akpọkwara El Anti-Galactico.
N'ikpeazụ, ọdịdị Iniesta nke na-enweghị isi mekwara ka aha ya bụrụ ya (Onye Na-acha Anya Ichie).
Andres Iniesta Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ-Ozugbo Ichetara akaụntụ IG
Andrés Iniesta jiri Instagram dịka onye ọ bụla ọzọ. “Abụ m nna ọ na-amasịkarị ịse ụmụ ya foto, nri mara mma, na ụlọ mara mma,” enye ama ewet ke ndondo emi enye okodude.
Otu ụbọchị, Iniesta na mberede chọtara akaụntụ ya, yana Instagram na-ekwu na ya ga-emebi usoro ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na ezinụlọ ndị ahụ, nri, na foto ụlọ.
Iniesta chọpụtara na ọ bụ ntakịrị ihe, ọnọdụ ahụ enwetakwu banyere mgbe ọnụnọ Instagram ya bụ, na-enweghị ịdọ aka na ntị, dochie ya na Andrés Iniesta ọzọ.
Iniesta gbalịrị ịbịakwute Instagram ọtụtụ ugboro n'enweghị mmeghachi omume site na ụlọ ọrụ, ọbụna mgbe foto ya nwụsịrị ma aha ya nye onye ọzọ.
Mana n'ikpeazụ Instagram mere ka ihe dị mma, weghachite akaụntụ mbụ nke Iniesta na ịmanye kpakpando bọọlụ gaa na nke ọzọ, ntakịrị aha njirimara na-adịchaghị mma.
Na nkwupụta enyere Gizmodo, Instagram abanyeghị na nkọwa banyere otu ụdị ihe a siri mee na ngwa ngwa na enweghị ezigbo ihe kpatara ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya.
"Anyị mehiere ebe a wee weghachite akaụntụ ahụ ozugbo anyị matara banyere ya," ụlọ ọrụ ahụ kwuru. "Mgbaghara anyị na-agara Maazị Iniesta maka nsogbu anyị kpatara ya."